သူတို့အသင်းကိုနိုင်တာ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်သလိုအောင်ပွဲခံနေတယ်လို့ မန်ယူအသင်းသားတွေကို ဆောက်သမ်တနိနည်းပြဝေဖန် – FBV SPORT NEWS
November 30, 2020 By admin Sports News, Uncategorized
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဟာ ဆောက်သမ်တန်ရဲ့ စိန့်မယ်ရီကွင်းမှာအဝေးကွင်းပွဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၀) အဖြစ် ကစားခဲ့ရာမှာ 2-3 ရလဒ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်
မထင်မှတ်ထားပဲ ၂ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနေရာက လူစားဝင်လာတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကာဗာနီနဲ့ ဘရူနိုတို့ ရဲ့ ယုံနိုင်စရာမကောင်းတဲ့ နောက်ကျဂိုးတွေနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့‌အောင်ပွဲခံခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီပွဲနဲ့ပက်သက်ပြီး
နည်းပြ Ralph Hasenhüttlက
“အဝတ်လဲခန်းထဲသူတို့အောင်ပွဲခံနေတာကို ကျနော်တို့အတိုင်းသားကြားနေရတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီကနေ့ကျနော်တို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ သူတို့အောင်ပွဲခံနေကြတာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းပါပဲ”
“ဒါ ကျနော့်အတွက်တော့ပြောစရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့ဒီလိုအောင်ပွဲခံနေကြတယ်ဆိုတာဟာ ဒီနေ့ သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ကိုအနိုင်ကန်ဖို့ သူတို့အကောင်းဆုံးကစားခဲ့ရတယ်။ ကျနော့်အသင်းကစားခဲ့တဲ့ပုံကို ကျနော်ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်(၂)ဂိုးစီသရေကျနေတဲ့အချိန်က ကျနော့်အတွက်အဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် တတိယဂိုးထပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့လည်း တတ်နိုင်သလောက်ဒီနေ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကစားခဲ့ပါတယ်”လို့ဆောက်သမ်တန်နည်းပြကပြောကြားခဲ့တာပါ။
.ဒီပွဲမှာ ကာဗာနီ ရဲ့ နောက်ကျဂိုး ၂လုံးနဲ့ အတူ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ မမြင်ရတာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့
၂၀၀၇-၀၈ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ မန်ယူရဲ့ တီဗက်စ်၊ရော်နယ်ဒို၊ရွန်းနီတို့လို တိုက်စစ်အတွဲကို ဒီနေ့ပွဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်…အဲ့ဒီချိန်က မန်ယူမှာ ပြိုင်ဘက်နောက်တန်း ကို အချိန်ပြည့်ချိန်းခြောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲဆိုလည်း မမှားပါဘူး….
ဒီနေ့ ဆောက်သတန်ပွဲမှာလည်း အဲ့ဒီအချိန်ကလို တိုက်စစ်အတွဲကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်…..လုံးဝဥသုံကြီးမမီသေးဘူးဆိုပေမဲ့…ဒါကလူငယ်တွေ…ဒါကရာသီအစလေ……အဲ့ဒီတိုက်စစ်အတွဲကဘယ်သူတွေလဲဆို ကာဗာနီ ၊ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ၊ ရတ်ဖို့တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ
မိနစ် ၅၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဆောက်သမ်တန် ဂိုးပေါက်နား တဝိုက်မှာ တချိန်လုံးဒီတိုက်စစ်အတွဲက ချိန်းခြောက်နေခဲ့ပါတယ်….ရတ်ဖို့စ်ရဲ့ပြေးအား အလိမ်အခေါက်တွေ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကစားအားတွေ ….
ဘရူနိုရဲ့ ထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းတွေ နေရာလွတ်ရာနိုင်စွမ်းတွေ တကွင်းလုံးပတ်ကစား နိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်မှုတွေ ဂိုးပေါက်ချိန်းခြောက်မှုတွေကို
ကျနော်တို့ နံပါတ် ၇ ကြီး ကာဗာနီရဲ့ အဆုံးသတ်သေချာမှု နေရာယူကောင်းမှုတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ၂၀၀၇-၀၈ ကတိုက်စစ်အတွဲလို ပြိုင်ဘက်အသင်းကို ချိန်းခြောက်နိုင်မယ့် တိုက်စစ်အတွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမလွဲတော့ပါဘူ
ဗန်ဒါဘတ်ကလည်း ပထမပိုင်းမှာ ဘရူနိ ၊ ရတ်ဖို့စ် တို့နဲ့ အတူတူ တိုက်စစ်ကို တွဲလုံးမိမိ ကစားလာပြီး အထိုင်ကျပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသနေပါပြီ